Iphupha likaBauer Discover Discover Discover kwi-Intanethi ▷ ➡️
Umlimi uzibandakanya kwezolimo. Uvelisa imifuno okanye iimveliso zezilwanyana kumhlaba wakhe nakwifama yakhe, uninzi lwayo lusetyenziselwa ukutya. Kuxhomekeka kugxilwe, ke, ikwabizwa ngokuba ngumlimi okanye umfuyi weenkomo.
Unokudibana nomfama kwakhona el mundo yamaphupha. Mhlawumbi usebenza ngeharika nekhuba, okanye uzinikele ngokupheleleyo ekusebenzeni nezilwanyana zakhe: ukucoca ishedi yomgquba, ukufafaza umququ esandula ukondla imfuyo yakhe. Ukutolikwa kuxhomekeke kakhulu kwisenzo sephupha kunye neemeko zokuphila zephupha kwihlabathi lokuvuka, ke umntu makakhumbule iinkcukacha ezininzi zephupha kangangoko kwaye athathele ingqalelo kwizinto ezimkhathazayo ebomini.
1 Uphawu lwephupha «umlimi» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «umlimi» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «umlimi» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «umlimi» - ukutolikwa ngokubanzi
Umlimi uhlala etolikwa njengomfanekiso wephupha njengophawu lomnqweno wephupha lendalo kunye nobomi obulula. Kule meko, umlimi uhlala efuzisela uqhagamshelo lomhlaba ngobomi kunye nangezivumelwano zendalo. Ukuba iphupha libona umfama esebenza okanye eqhuba itrektara okanye itrektara yombungu, uya kuba nekamva elihle nelikhuselekileyo kwihlabathi elivukayo. Ukuba kuvela umfazi ongumlimi, iphupha elo lizisa lukhulu. Suerte ebomini bokuvuka.
Ukuba iphupha eli lidibana nomfama osemncinci ebuthongweni bakhe, oku kuthetha ukuba uya kuba nethamsanqa kwaye aphumelele kubomi bobuchwephesha nakwabucala. Olu toliko luyasebenza naxa ubona umlimi oselula esebenza.
Nangona kunjalo, ukuba umfama omdala ubonakala kwilizwe lamaphupha, yeka ingxaki kunye neengxaki eziya kuthintela ukuqhubela phambili kokulala. Ukuba iphupha libona umlimi wakudala esebenza, iphupha elo kuyakufuneka lisebenze nzima kwaye lidinise kwihlabathi elivukayo kwaye liya kuba neengxaki ezininzi zokuziphilisa.
Ukuba iphupha ngokwalo liyasebenza kwilizwe lamaphupha njengomlimi, uya kuhlala ebomini kunye neendlela ezinyanisekileyo. Nangona kunjalo, ukuba umfama uyamngcatsha, ilizwe labalindi limgrogrisa ngokuhlekisa. Ukurhweba nomfama kuthembisa ubomi obude kulowo uphuphayo, ngelixa incoko nomfama malunga nephupha ityhila ukuba uziphakamisile. Nangona kunjalo, kulungile ukuba iphupha lihamba nomfama, kuba emva koko kubhengezwe ilifa elingalindelekanga.
Ukuba umfama usebenzisa umatshini wokucheba ingca ephupheni, oku kungabonisa utshintsho olulungileyo umphuphi alweleyo.
Uphawu lwephupha «umlimi» - ukutolikwa kwengqondo
Ukutolikwa kwengqondo yamaphupha, umfama luphawu lwe Unxibelelwano nendalo watolika ukhuseleko. Ukuba ukuphupha kwihlabathi elivukayo kuhlala kwelo lizwe, mhlawumbi uyazi imeko-bume egudileyo yegumbi lendlu yasefama, kuhlala kukho ukubhekiswa ngokuthe ngqo kukungqonge isenzo sephupha. Nangona kunjalo, ukuba iphupha lihlala kwisixeko esikhulu, ke lo mfanekiso wephupha uhambisa iphupha ukuba liphinde linxibelelane ngakumbi nendalo.
Ukuphupha kuhlala kufuna ukoneliseka ebomini xa umfama ebonakala njengomfanekiso wephupha. Ukukhangelwa kwemvisiswano nendalo kufuneka kuqondwe kule meko njengokuhambelana nobuntu bakhe.
Nangona kunjalo, ukuba umfama ophuphayo mdala kwaye uyagula, kuyabonisa ngcwabeni Iingxaki kubomi bamaphupha.
Uphawu lwephupha «umlimi» - ukutolika kokomoya
Umlimi usetyenziselwa ukutolika amaphupha okomoya njengonxibelelwano kunye Umama wendalo Itolikiwe